तिहारमा गाउँ फर्कनुअघि कोभिड खोप लगाउन पाउँदा के भन्छन् सर्वसाधरण? [भिडियो] :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
तिहारमा गाउँ फर्कनुअघि कोभिड खोप लगाउन पाउँदा के भन्छन् सर्वसाधरण? [भिडियो]
स्वास्थ्यखबर बुधबार, कात्तिक १७, २०७८, १३:५३:२८
काठमाडौं- तिहार मनाउन गाउँ फर्किनेहरुलाई धमाधम कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन शुरु गरिएको छ। सरकारले तिहार तथा छठ मनाउन काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर गाउँ फर्किने नागरिकहरुलाई उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरुबाट कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइरहेको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार तिहार र छठ मनाउन गाउँ फर्किनेहरुलाई काठमाडौं उपत्यकाको बल्खु, कोटेश्वर, गोंगबु र कलंकी चोकमा कोरोनाबिरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन भइरहको छ। आम नागरिकलाई कोरोनाबिरुद्धको खोप लगाउन दिएको खबर सञ्चारमाध्यमबाट सुनेपछि कोरोनाबिरुद्धको खोप लगाउन आएको सर्वसाधारणहरुले बताएका छन्। सर्वसाधारणहरुले सरकारले गरेको यो कार्यक्रम उचित रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरुले कोरोनाबिरुद्धको खोप लगाउन पाउँदा आफूले सुरक्षित महशुस गरेको बताए ।
मन्त्रालयका अनुसार दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने खोप अभियान बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ४ बजेसम्म हुनेछ। मंगलबारबाट शुरु भएको खोप अभियान नागरिकले आफ्नो परिचयपत्र देखाएर लगाउन सक्नेछन्।
भारतमा फेरि संक्रमण बढेसँगै नेपालमा के छ अवस्था? सहप्रवक्ता अधिकारीले अहिले भारतमा फैलिएको कोरोना ओमिक्रोनकै एउटा प्रजाती रहको प्रारम्भिक तथ्य फेला परेको बताए। यद्यपि यस विषयमा अध्ययन अनुसन्धान भइरहेकोले थप विवरण आउन समय लाग्ने उनको भनाइ छ। मंगलबार, वैशाख २०, २०७९
कोरोना संक्रमणको दर कम भएपनि जोखिम कम भइसकेको छैन– डा समीर अधिकारी [भिडियो] शुक्रबार, फागुन २७, २०७८
ओमिक्रोनले भयावह स्थिति ल्याउने सम्भावना कति? (भिडियो वार्ता) बढ्दो कोरोना संक्रमितको ग्राफलाई यसका विज्ञले कसरी नियाली रहेका छन्? ओमिक्रोन भेरियन्टले भयावह स्थिति ल्याउने सम्भावना कत्तिको छ लगायत विषयमा सरुवा रोग विशेषज्ञ डा शेरबहादुर पुनसँग कुराकानी गरेका छौँ। शुक्रबार, पुस ३०, २०७८